Damaanad / Service - Shenzhen iftiimeen Technology Co., Ltd.
Iftiimeen bixiyaan taageero buuxda loogu talagalay macaamiisha our ee pre-sale iyo iibka ka dib. Waxay bixisaa khayraadka online ballaaran si ay u taageeraan khadadka our alaabta kala duwan. Browse qaybta Taageerada iyo nala soo xiriir waa in aan aad u hesho macluumaadka loo baahan yahay.
Fasaxyada, Qorshayaasha Service and Repair
Iftiimeen bixisaa taageero weyn, bandhigay uptime iyo waxqabadka aan fiicnayn. Si ay u bixiyaan heerka ugu sareeya ee adeega, iftiimeen sameeyaa nafteena.
damaanad Industry-keentay waa caadiga ah la soo saarka iftiimeen LED.
Qorshayaasha Service Product
Suite ah cillad in ay la kulmaan baahida. Xafiiska Invest in Plan Service Planar ah si aad iskaga dayactirka qaali ah iyo downtimes dheer ilaaliyo.
Helitaanka shabakad caalami ah oo farsamo heegan ah u tababaran si loo hubiyo habka iftiimeen ayaa lagu rakibay, lagu hayo iyo cusboonaysiiyey heerarka fiicnayn.
Adeegyada Repair iftiimeen waa ikhtiyaarka ah haddii sheyga waa out of damaanad iyo haleysan.
LED damaanad Products Standard Limited
Hambalyo aad iibsatay derbiga a video iftiimeen LED! Iyada oo loo xirxiro habboon, Mudanayaasha iyo daryeelka, waa in aad ku raaxaysato sannado badan oo tayo leh image qabanin, isku halaynta iyo waxqabadka.
Shuruudaha iyo xaaladaha ka mid ah damaanad Standard Limited socda wakiil heshiis inoo dhexeeya, soo saaraha ah ee badeecada derbiga video ah LED (Shenzhen iftiimeen Technology Co., Ltd "nuuri") oo aad u, qofka macaamiisha ah ayaa iibsaday iftiimeen LED video saarka derbi si toos ah uga nuuri ama ka qaybiyaha idman iftiimeen ama ka ganacsada. Tani waxay damaanad Standard Limited waxaa lagu bixiyaa lacag la'aan la iibka ah ee wax soo saarka la daboolay ka qoysaska soo socda: nuuri LED qaab derbiga video.
Tani waxay damaanad Standard Limited khusaysaa waxyaabaha iftiimeen daboolay iibsatay ama ka dib taariikhda wax ku ool ah ee hoos ku xusan. Iftiimeen xaq u leedahay inay bedesho shuruudaha damaanadda this. Isbedeladan ka codsan doonaa in ay wax soo saarka iftiimeen daboolay iibsatay ama ka dib taariikhda uu dhaqan damaanad ah dib loo eegay.
• ilaalinta 2-sano ka cilladaha in qalab iyo sanco
• shixnad Advanced ee qaybo ka bedelka ama wax soo saarka (marka laga reebo marmarka LED)
• Helitaanka 24x7 taageero telefoonka degdegga ah
Iftiimeen faragalin waxyaabaha ay xor ka ahaadaan cilladaha in qalab iyo sanco inta lagu jiro waqtiga damaanada hoos ku bixiyo. Haddii, in go'an, wax soo saarka caddaynaysaa in la haleysan yahay in wax ama sancada inta lagu jiro waqtiga damaanada, waxaan lagu dhiso doono ama bedeli qaybta haleysan la qayb ka mid ah oo cusub ama dayac tiray. Haddii arrinta loo arko cillad saarta la sheyga LED, aan hagaajinno doonaa ama bedelo qaybta haleysan at our digtoonaan. Haddii hagaajin ama beddelaad ah qayb ka mid ah ama wax soo saarka la go'aamiyo noo by in aanay noqon ganacsi macquul ah, waxaan soo celin doonaa share a soo hormariyay qiimaha iibka (saleeyaa inta ka dhiman waqtiga damaanada iyo MSRP1 ka dibna-hadda isku ah ama a alaabta la mid ah).
In Period damaanad ah, ee aanu hayno doono iyo bedelo qaybaha iin ah oo bilaash ah, haddii dhibaatada iska leh noo. Laakiin waa in aad bixiso lacagta ujrada labada shixnad.
2 sano ka dib, waxaan kaliya ka qaadaan kharashka wax, waa in aad masuul ka tahay shixnaddii noqon.
Dhamaan waxyaabaha derbiga video LED waxaa lagu damaanad muddo laba sano ah laga bilaabo taariikhda shixnad ka iftiimeen. All Accessories iyo Field Units badeli (FRUs), oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn fiilooyinka, remotes, Koronto iyo guddiyada xakamaysada ah, marmarka LED, iibsaday waqtiga heshiiska waxiibsashada hore sheyga waxaa lagu damaanad muddo saddex sano ah laga bilaabo taariikhda shixnad ka iftiimeen. All accessories iyo FRUs soo iibsatay ka dib iibka hore wax soo saarka ah loogu baahan yahay 90 maalmood laga bilaabo taariikhda shixnad ka iftiimeen.
Tani waxay damaanad Standard Limited daboolayaa alaabta iibsatay ka ganacsada idman iftiimeen ama sheydaan ama qaybiyaha iyo waa ansax ah oo keliya macaamiisha ah ee asalka ah, kuwaas oo iibsaday alaabta daboolan. dealer ama qaybiyaha la xiriiri kartaa Support Technical adiga ku matalaya haddii ay dhacdo iin wax soo saarka. warranty Tani ma aha wareejin. waxaa laga yaabaa in loo baahan yahay in aad keento caddeyn ah caddaynta iibsashada.
Tani waxay damaanad Standard Limited kuma jiraan ama waxaa xadiday soo socda:
1. Products ma iibsaday qaybiyaha iftiimeen ama idman iftiimeen ama ka ganacsada.
2. kharashka shaqada ama safarka loogu rakibo, dhigay-up, dayactirka, qabsiga in uu soo bandhigo goobaha, ka saarida, dib-u-rakibo ama kharashka shaqada kale gashay by macaamiisha.
waqtiga dhalmada 3. raridda iyo helitaanka kala duwan waxaa laga yaabaa in ku salaysan asalka iyo Noqosho. Waxaan awoodin in ay ugu gacangeliyaan PO Box iyo NUSOJ / cinwaanada FPÖ Box.
4. kharashka kirada gashay by macaamiisha.
5. wax soo saarka kasta oo ku saabsan taas oo tirada serial ayaa la tirtiray, dib u habaynta ama laga saaro.
6. Product oo uu soo iibin, wareejin, kiro, ijaaray, lumay, la xaday ama la tuuraa.
7. software kasta, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn nidaamka qalliinka.
8. Burburka, sii daraysa ama cillad ka dhashay:
A. Accident, xadgudub, si xun u isticmaalka, dayacaad, hawo khaldan & qaboojinta, dab, biyo, masiibo, hillaac ama falalka kale ee dabiiciga ah, soo-gaadhista qiiqa (sigaarka ama haddii kale), wax ka beddelid soo saarka fasaxin (oo ay ku jiraan isticmaalka buurta ah aan la ogalayn), ama failure in la raaco tilmaamaha bixisey sheyga.
B. Repair, ama la isku dayey dayactir, cid kale oo aan ahayn iftiimeen.
C. dhaawac kasta oo alaabta lagu jiro ama ay sabab u tahay shixnaddii.
D. dhaawac kasta inta lagu guda jiro rakibaadda, ka saarida, disassembly iyo reassembly ee alaabta by macaamiisha.
E. Sababaha dibadda in sheyga, sida isbedbedelka koronto ama failure.
F. Isticmaalka sahay ama qaybo aan la kulmo caddaymaha iftiimeen 's.
G. CAADIGA AH Rifanka iyo iyo mid caadi ah heer pixel fall-baxay ee la xidhiidha garoonka wanaagsan technology LED.
H. Customer keena cilladaha, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn uu Kokes ku dhaawacmeen ka dhashay garaacid ku laayeen ama la xoqo oo ay weheliso hore.
I. kasta-midayso aan sababa muddo dheer 24/7 qaliin derbiga video la ah loola imaanayn content ma guurto ah.
J. dhicitaanka in la raaco nidaamka dayactirka sida ku cad Guide User soo saarka ee halkaas jadwal waxaa loo cayimay dayactirka joogtada ah ee alaabta.
K. kasta sabab kale oo aan la xiriirin iin in wax ama sancada.
L. Kaxaynta bandhigay ka baxsan shuruudaha isticmaalka caadiga ah soo jeediyay ayaa sheegay in Guide User ah.
M. Software ama cillad siyaada.
Kaladuwan Return Arrimaha
1. Ma aqbali doono wax soo saarka ku soo laabtay.
2. Haddii sheyga haleysan waxaa soo noqdeen oo ka go'an in ay la laga saaray damaanad hoos ka mid ah saaris kor ku xusan, waxaan xaq u leeyihiin inay ka qaadaan qofka macaamiisha ah lacagta aan ka badnayn MSRP ku leenahay.
3. Haddii alaabta la soo celiyo oo la go'aamiyo in ay unit a No helin (NFF), waxaan xaq u leeyahay inuu biilka macaamiisha wixii kharashka by iftiimeen leenahay.
4. Waxaa mas'uul ka ah macaamiisha in ay si sax ah wax loo sheyga haleysan yahay iyo waxa markab cinwaanka ay bixiyaan Wakiilka Adeegga Macaamiisha tirada RMA ku cad soo bandhigay. Haddii Product ka haleysan waxaa si fiican u soo baakadeeyey oo waxaa burburay ee gaadiidka inta lagu guda jiro ay soo laaban iftiimeen, macaamiisha laga yaabaa in lagu soo oogay labada kharashka dayactirka, haddii repairable, ama MSRP ee alaabta bedelkiisa.
5. qaybo Beddelista ama alaabta u qaadan doono inta ka dhiman damaanad wax soo saarka asalka ah ama 90 maalmood laga bilaabo taariikhda shixnad, hadba kii dheer.
6. Macaamiisha u ogolaaday in uu xajisto qayb ka bedelka ama wax soo saarka dhiibay iftiimeen iyo in ay qayb ka haleysan celin ama wax soo saarka uu noqonayaa hantida iftiimeen.
Saamaynta of Law Local
Tani waxay damaanad Standard Limited ku siinayaa xuquuq sharci gaar ah, waxaana laga yaabaa in aad leedahay xuquuq kale oo kala duwanaan karaa ka degaanka si ay degaanka. Qaar ka mid ah degaannada hana u oggolaan in xadeyn ku saabsan fasaxyada maldahan ama hana u oggolaan in ka saarida ee waxyeelo shil ah ama natiijo, sidaas oo kale ayaa la dhaafi karin ku xusan iyo ka saarid waxaa laga yaabaa in aanay adiga ku khusayn.